प्रदेश ५ मा संविधान उल्लास (फाेटाे फिचर)
विकाश पराजुली काठमाडौं, ३ असाेज
प्रदेश ५ सरकारले संविधान दिवस मनाएको छ । विहान ७ बजेट अस्थायी मुकाम बुटवलको राजमार्ग चौराहबाट ¥याली सुरु भई बुटवल मण्डपमा पुगेको थियो । ¥यालीमा लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरुमा नाचिने सराय नाच, तराई क्षेत्रमा नाचिने झुमरा नाच, थारु नाच, मयूर नाच, लाठी नाच, विभिन्न संघसंस्था तथा जातिहरुले आ–आफ्ना जातीय पोशाक सहितको झाँकी प्रदर्शन गरे ।
र्याली पश्चात आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीयताले प्रशासनिक खर्च बढाएपनि जनताको खर्च भने कटौती गरेको बताए । ‘संघीयताले विकासको आकाक्षा पुरा गरेन भनेर कतिपयले तर्क पनि गरेको छन् । संघियताले प्रशासनिक खर्च बढाएको स्वभाविक हो, कर्मचारी थप्नु पर्याे , तर जनता सानो सिफारिस गराउन सदरमुकाम जाने समस्या भने हटेको छ, यसले जनताको खर्च भने घटाएको छ,’ उनले भने ।
उनले कर्मचारी समायोजन, कानुन निर्माण र नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कारण गतवर्ष झमेलायुक्त वर्षको रुपमा रहेको भन्दै चालुवर्ष विकासका दृष्टिकोणले निर्णायक वर्ष बन्ने दावी गरे ।
त्यसैगरी उनले गतवर्षलाई कानुन निर्माण र प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमाको लागि खर्चिएको उल्लेख गर्दै चालुवर्ष विकासका लागि अनुकुल बन्ने बताए । उनले चालु वर्षलाई जनतालाई काम गरेर देखाउने वर्षको रुपमा लिएको र त्यहि अठोटका साथ सरकार लागि परेको बताए ।
प्रस्तुत गरिएका ९६ वटा झाँकीमध्ये उत्कृष्ट भएका १० वटालाई पुरस्कृत गरिएको छ । जसमा तिलोत्तमा नेवा मयजु खल प्रथम भएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ३, २०७६, २२:१०:००
प्रधानमन्त्री‍ ओलीले डाके सर्वदलीय बैठक
दलित शब्दकाे व्यापार
मैले चिया पकाउन सिकेँ नि ! तिमीले ?
संघीय संसदमा चुच्चे नक्सासहितको नयाँ लोगो अध्यावधिक